IQela leenqwelomoya ze-LATAM Ngoku IiFayile zeSicwangciso sokuHlenganiswa kwakhona kwiSahluko se-11
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IQela leenqwelomoya ze-LATAM Ngoku IiFayile zeSicwangciso sokuHlenganiswa kwakhona kwiSahluko se-11
I-LATAM Airlines Group SA kunye namahlakani ayo eBrazil, eChile, eColombia, e-Ecuador, ePeru, nase-United States namhlanje ibhengeze ukufakwa kweSicwangciso sokuHlanganisa kwakhona ("iSicwangciso"), esibonisa indlela eya phambili kwiqela lokuphuma kwiSahluko se-11. ngokuhambelana nomthetho wase-US nowaseChile. Esi sicwangciso sikhatshwa siSivumelwano seNkxaso yoHlengahlengiso (“RSA”) kunye neQela le-Parent Ad Hoc, elelona qela likhulu lamatyala angakhuselekanga kwezi meko zeSahluko se-11, kunye nabanye babaninizabelo be-LATAM.
I-RSA ibhala isivumelwano phakathi kwe-LATAM, abanini-zabelo sele bekhankanyiwe ngaphambili bangaphezulu kwe-70% yamabango angakhuselekanga abazali kunye nabanini malunga ne-48% ye-2024 kunye ne-2026 US Notes, kunye nabanini-zabelo abathile abaphethe ngaphezu kwe-50% ye-equity efanayo, ngokuxhomekeke ekwenziweni amaxwebhu aqinisekileyo ngamaqela kunye nokufumana ulwamkelo lwequmrhu ngabo banezabelo. Njengoko besenza kuyo yonke le nkqubo, zonke iinkampani zeqela ziyaqhubeka nokusebenza njengeemeko zokuhamba kunye nemvume yemfuno.
“Iminyaka emibini edlulileyo iphawulwe bubunzima kwihlabathi liphela- siphulukene nabahlobo kunye nosapho, abo sisebenza nabo kunye nesibathandayo. Kwaye siye sabuya umva njengoko ukuhamba ngenqwelomoya kunye nokuhamba kuye kwamiswa njengeyona ngxaki inkulu eyakha yajongana neshishini lethu. Ngelixa inkqubo yethu ingekapheli, sifikelele kwinqanaba elibalulekileyo kwindlela eya kwikamva eliqinileyo lezemali,” utshilo uRoberto Alvo, iGosa eliLawulayo leLATAM Airlines Group SA. inkqubo yolamlo eyomeleleyo ukufikelela kwesi siphumo, ebonelela ingqwalaselo enentsingiselo kubo bonke abachaphazelekayo kunye nesakhiwo esihambelana nomthetho wase-US nowaseChile. Ukufakwa kwabo kwenkunzi entsha ebalulekileyo kwishishini lethu bubungqina benkxaso yabo kunye nenkolelo kwithemba lethu lexesha elide. Sinombulelo ngeqela elikhethekileyo e-LATAM eliye lahlangabezana nokungaqiniseki kwiminyaka emibini edlulileyo kwaye lenza ukuba ishishini lethu liqhubeke lisebenza kwaye likhonza abathengi bethu ngaphandle komthungo kangangoko kunokwenzeka. "
Isicwangciso siphakamisa ukufakwa kwe-8.19 yeebhiliyoni zeedola kwiqela ngokuxutywa kwe-equity entsha, amanqaku aguqulwayo, kunye namatyala, okuya kwenza ukuba iqela liphume kwiSahluko se-11 kunye nemali efanelekileyo yokwenza isicwangciso soshishino. Ekuveleni kwayo, i-LATAM kulindeleke ukuba ibe netyala lilonke elimalunga ne-7.26 yeebhiliyoni zeedola kunye ne-liquidity emalunga ne-1 yeebhiliyoni zeedola. Iqela lifumanise ukuba lo ngumthwalo ogciniweyo wamatyala kunye nemali efanelekileyo yokuhlawula amatyala ngexesha lokungaqiniseki okuqhubekayo kuphapho lwehlabathi kwaye iya kubeka iqela phambili ngcono.
Ngokukodwa, isiCwangciso sichaza ukuba:
• Emva kokuqinisekiswa kweSicwangciso, iqela lizimisele ukusungula i-800 yezigidi zeedola ezinikezela ngamalungelo okulingana okufanayo, evuleleke kubo bonke abanini-zabelo be-LATAM ngokuhambelana namalungelo abo angaphambili phantsi komthetho osebenzayo waseChile, kwaye babuyiselwe ngokupheleleyo ngamaqela athatha inxaxheba kwi-RSA, ngokuxhomekeke ukuphunyezwa kwamaxwebhu aqinisekileyo kunye, ngokubhekisele kubanini-zabelo abasemva, ukufumana iimvumelwano zeshishini;
• Iiklasi ezintathu ezahlukeneyo zamanqaku aguqulekayo ziya kukhutshwa yi-LATAM, zonke ziya kunikezelwa kwangaphambili kubaninizabelo be-LATAM. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokungabhaliswanga ngabaninizabelo be-LATAM ngexesha lamalungelo alandelayo:
o Amanqaku aguqulwayo iKlasi A iya kunikwa ababolekisi abaqhelekileyo abangakhuselekanga be-LATAM yomzali kwi-settlement (dación en pago) yamabango abo avunyelwe phantsi kweSicwangciso;
o Amanqaku aguqulwayo uKlasi B luya kubhaliswa kwaye luthengwe ngabaninizabelo abakhankanyiweyo ngasentla; kwaye
o Amanqaku aguqulwayo Udidi C luya kubonelelwa kubabolekisi abangakhuselekanga ngokubanzi ngokutshintshela indibaniselwano yemali entsha kwi-LATAM kunye nokuhlawulwa kwamabango abo, ngokuxhomekeke kwimida ethile kunye nokubanjiswa ngamaqela abuyela emva.
• Amanqaku aguqukayo eeklasi eziguqulelwayo zodidi B no-C ke ngoko ziya kubonelelwa, ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye, kuqwalaselo lomnikelo omtsha wemali yesixa-mali esiqikelelwa malunga ne-4.64 yeebhiliyoni zeerandi ezixhaswa ngokupheleleyo ngamaqela e-RSA, ngokuxhomekeke ekufumaneni ukubuyisela umva abaninizabelo kwiimvume zenkampani;
• I-LATAM izakunyusa i-$500 yezigidi zenkxaso-mali entsha ejikelezayo kwaye malunga ne-2.25 yeebhiliyoni zeerandi kwityala lemali lilonke lilonke, eliquka imali-mboleko yexesha elitsha okanye iibhondi ezintsha; kwaye
• Iqela likwasebenzise kwaye lijonge ukusebenzisa inkqubo yeSahluko se-11 ukuxhasa ngemali ngokutsha okanye ukulungisa iingqeshiso zeqela zangaphambi koxwebhu lwezikhalazo, uncedo lwetyala olujikelezayo, kunye noncedo lwenjini.
Udliwano-ndlebe lokwamkelwa kokufaneleka kweNgxelo yokuDiza yeSahluko se-11 kunye nokwamkelwa kweenkqubo zokuvota kulindeleke ukuba kubanjwe ngoJanuwari wama-2022, ixesha elikhethekileyo lixhomekeke kwikhalenda yeNkundla. Ukuba iNgxelo yokuDiza yamkelwe, iqela liya kuqalisa ukucela ngelo xesha liya kufuna imvume yeSicwangciso kubabolekisi. I-LATAM icela ukuxoxwa kwetyala ukuze kungqinwe ukuba iSicwangciso siya kubanjwa ngoMatshi wama-2022.
Ngolunye ulwazi, i-LATAM idale iwebhusayithi ezinikeleyo: www.LATAMreorganizacion.com, apho abachaphazelekayo banokufumana ulwazi olongezelelweyo oluphambili malunga nesi sibhengezo. Eli qela likwaseke umnxeba wokutsalela umnxeba ngemibuzo enxulumene neSahluko se-11, nenokufumaneka apha:
• (929) 955-3449 okanye (877) 606-3609 (e-US naseKhanada)
• 800 914 246 (eChile)
• 0800 591 1542 (eBrazil)
• 01-800-5189225 (Kholombiya)
• 1800 001 130 (e-Ecuador)
• 0800-345-4865 (eArgentina)
Ikwanayo ne-imeyile ezinikeleyo yemibuzo enxulumene nohlengahlengiso kwi [imeyile ikhuselwe]
I-LATAM icetyiswa kule nkqubo nguCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP kunye noClaro & Cia. njengabacebisi bezomthetho, iFTI Consulting njengomcebisi wezezimali, kunye nePJT Partners njengomgcini-mali wotyalo-mali.
Iqela le-Parent Ad Hoc, elikhokelwa yiSitrato seSithandathu, i-Strategic Value Partners, kunye ne-Sculptor Capital, icetyiswa nguKramer Levin Naftalis & Frankel LLP, uBofill Escobar Silva, kunye noCoeymans, Edwards, Poblete & Dittborn njengabacebisi bezomthetho kunye no-Evercore njengotyalo-mali. umgcini-bhanki.
Abaninizabelo bakhankanyiweyo ngasentla baquka (a) Delta Air Lines, Inc., ecetyiswe nguDavis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, kunye noPerella Weinberg Partners LP njengomcebisi wezomthetho kunye nomgcini-mali webhanki, (b) iQela leCueto kunye ne-Eblen. Iqela,2 elicetyiswe nguWachtell, Lipton, Rosen & Katz kunye neCuatrecasas njengomcebisi wezomthetho, kunye (c) neQatar Airways Investment (UK) Ltd., ecetyiswe nguAlston & Bird LLP, Carey Abrogados, kunye neHSBC njengomcebisi wezomthetho kunye nomgcini-mali wotyalo-mali. . Abanye baba baninizabelo bacetyiswa ngokwesikhundla sabo ngabanye yiGreenhill & Co., LLC kunye ne-ASSET Chile, SA njengabacebisi ngezemali.
NgoDisemba 2, 2021 kwi-05: 23
Phonononga izisombululo esinazo kwimingeni enzima kunye namathuba akho. Nangona amazwe ngamanye eUnited States anemithetho elawula ubudlelwane phakathi kwabanamatyala kunye nabo babatyalayo, umthetho wokutshona.